Google ရုံးသုံးအက်ပလီကေးရှင်းများသည်ရှာဖွေရေးဘားအသစ်တစ်ခုရရှိသည် Androidsis
Google Documents သည် 'Document Status' အညွှန်းအသစ်နှင့်ရှာဖွေရေးအကွက်အသစ်ကိုရရှိသည်
အနည်းငယ်အသစ်အဆန်းသော Google Docs မှာအရမ်းစိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းလာတယ် ကျွန်ုပ်တို့တည်းဖြတ်ထားသည့်စာရွက်စာတမ်းကိုသိမ်းဆည်းထားသလားသို့မဟုတ်ထပ်တူပြုရန်လိုအပ်သည်ဆိုသည့်အချက်နှင့်၎င်းအားကျွန်ုပ်တို့အားအချိန်မရွေးသိရန်ခွင့်ပြုသည်။
ပထမ ဦး ဆုံးအသစ်အဆန်းမှာကျွန်ုပ်တို့၏ Android ထုတ်ကုန်များအတွက် Google Documents ၏ desktop version ကိုရည်ညွှန်းခြင်းဖြစ်သည် ငါတို့မှာသေးငယ်တဲ့နောက်ထပ်တစ်ခုရှိသေးတယ်၊ ဒါကရှာဖွေရေးနယ်ပယ်အသစ်တစ်ခုဖြစ်သည်.
ကျနော်တို့ကဒုတိယကနေစပြီးတော့အဲဒါကိုကျွန်တော်တို့စိတ်ဝင်စားတယ်။ ၎င်းတို့ကို Spreadsheets နှင့် Presentations များမှလည်းလက်ခံရရှိသည်။ ဒီရှာဖွေရေးဘား (သို့) နယ်ပယ်အသစ်သည်အရင်ဗားရှင်းများတွင်ကျွန်ုပ်တို့မြင်တွေ့ခဲ့ရသောကြီးမားသောဂူဂဲလ်လိုဂိုကိုအစားထိုးလိုက်သည်။
ဒီအကြောင်းစိတ်ဝင်စားစရာအကောင်းဆုံးအရာ အသစ်ရှာဖွေမှုဘားသည်၎င်းသည်ကျွန်ုပ်တို့အားအကောင့်အိုင်ကွန်ကိုပေးသည် ငါတို့လက်ရှိအလုပ်လုပ်နေကြရသော။ တနည်းအားဖြင့်၎င်းသည်ကျွန်ုပ်တို့အားအကောင့်များအလျင်အမြန်ပြောင်းလဲရန်ခွင့်ပြုလိမ့်မည်။ အောက်ပါအမူအရာဖြင့်သင်နောက်ထပ်အကောင့်သို့ပြောင်းလဲလိမ့်မည်ဟုကျွန်ုပ်တို့ပင်ပြောနိုင်သည်။
ဒီအသစ်အဆန်းကိုရယူနိုင်ဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့ဟာ Google Play ကိုဖြတ်ပြီးအက်ပလီကေးရှင်းသုံးခုကို update လုပ်ရမယ်။ Google Documents ၏ desktop version နှင့် ပတ်သက်၍ ကွန်ယက်အခြေအနေနှင့်ထပ်တူ၏အွန်လိုင်းညွှန်ပြချက် ကျနော်တို့တည်းဖြတ်နေကြသည်စာရွက်စာတမ်းများ၏။ ဤနည်းဖြင့်တည်းဖြတ်သောစာရွက်စာတမ်းသည်တိမ်တိုက်ထဲတွင်ရှိနေပြီးကျွန်ုပ်တို့အခြားအရာတစ်ခုသို့ရွေ့ပြောင်းနိုင်မလားဆိုတာသေချာစွာသိလိမ့်မည်။
El default state ဆိုတာအရာအားလုံးပြီးပြည့်စုံတယ်ဆိုတာကိုပြတဲ့ icon ဖြစ်တယ် နှင့်ထပ်တူပြုခြင်း။ စာရွက်စာတမ်းကိုစတင်တည်းဖြတ်သည်နှင့်တပြိုင်နက်၎င်းသည် "ချွေတာခြင်း" ကိုပြသည့်အိုင်ကွန်သို့သွားသည်။ စာရွက်စာတမ်းအော့ဖ်လိုင်းရှိသလားဆိုတာကိုလဲပြောခွင့်ပြုပါတယ်။
နှစ် Android မှ Google ရုံးသုံးအက်ပလီကေးရှင်းများအတွက်သတင်းငယ် နှင့်စာရွက်စာတမ်းချွေတာ status ကို၏သေးငယ်တဲ့အသေးစိတ်။ ထည့်သွင်းရန်သေးငယ်တဲ့အသေးစိတျ အက်ပလီကေးရှင်းသုံးခု၏ဒီဇိုင်းသစ်၏အတွေ့အကြုံ.
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - Androidsis ပါ » Android application များ » Google Documents သည် 'Document Status' အညွှန်းအသစ်နှင့်ရှာဖွေရေးအကွက်အသစ်ကိုရရှိသည်
Realme X3 SuperZoom ကိုမိတ်ဆက်ခဲ့သည်။ ၁၂၀ Hz panel နှင့်ကြယ်များကိုဖမ်းယူရန်ကင်မရာများ